Wanta akka garagalcha tti yookiin akka geessituu tti galmee keesssa saaguu ni dandeessa. Garagalchi wantaa wanta xabboo irraa bilisa. Jijjiiramni wanta xabboo garagalcha irratti galteewwan hoomaayyuu hin qabu. Geessituun wanta xabboo irratti hirkataa tahee hafa. Jijjiiramni wanta xabboo geessituu keessaattis ni calaqqisiisama.
Wanta akka garagalchaatti saaguu
Kabala Walta'inaa irraa sajoo Kuusaa faayaa cuqaasuun, yookiin Meeshaalee - Kuusaa faayaa filachuun Kuusaa faayaa bani.
Cuqaasa qeenxee fayyadamuun wanta fili.
Wanta garakeessa galmichaatti harkisi, yookiin baafata halqaraa banuuf mirga cuqaasiitii Saagi fi Garagalchi fili.
Wanta akka geessituutti saaguu
Cuqaasa qeenxee tiin wanta fili.
Wanta akka saxaatoo duubbeetti saagi
Baafata halqaraa baniiti Saagi - Duubbee - Fuula yookiin Keewwata fili.
Wanta biroof wanta akka makalluu (sarxaa)tti saaguu
Wanta irra wanta gara biroo galmee keessaatti AjajaCtrl harkisi.
Title is: Kuusaa faayaa Irraa Wantoota Saaguu